Internet Download Manager IDM 6.19 Build2Full Version + Patch - .::just for share::.
Home » IDM » Internet Download Manager IDM 6.19 Build2Full Version + Patch
မင်္ဂလာပါဗျာ ဒီနေ.ကျွန်တော်တင်ပေးချင်တာလေးကတော့ မကြာခဏ update ထွက်တက်တဲ့ IDM လေး ပဲဖြစ်ပါတယ် ဟိုရက်က လဲ update ထွက်လာလို. တင်ပေးပြီးတာ တစ်လတောင်မပြည်.သေးပါဘူး ဟော အခုလဲ ထပ်ထွက်လာပါပြီ ဒီကောင်လေးကတော့ 21.2.2014 ရက်နေ. တမြန်နေ.က ထွက်လာတာလေးပါ ဗားရှင်းအသစ်တွေကိုမှစွဲစွဲလန်းလန်းသုံး ကြတဲ့ အကိုအမတွေအတွက် အဆင်ပြေအောင် အထဲမှာ patch ဖိုင်လေးပါထည်.ပေးထားတာကြောင့် full version အဖြစ်သုံးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် setup ဖိုင်လေး ကို ထုံးစံ အတိုင်း install လုပ်ပြီးတာနဲ. patch ဖိုင်လေးကို C:/program File/Internet Download Manager ဆို တဲ့ ဖိုလ်ဒါလေးထဲ သွားထည်.ပြီး run လိုက်ရင် အောက်ကပြထားတဲ့ ပုံလေးလိုပွင့်လာပါမယ်
အဲ့ဒီ ဘယ်ဖက် အပေါ်နားလေးက အစိမ်းရောင်နဲ. ပြထားတဲ့ PATCH ဆိုတာလေးကို ကလစ်ပေးလိုက်ရင် full version ရပါပြီ သြော် patch အသုံးပြုနေစဉ် အတွင်း IDM ရဲ. processes တွေကို ပိတ်ပေးထားဖို. တော့လူတိုင်းသိမယ်ထင်ပါတယ် မမေ့နဲ.အုံးနော် ......:D အားလုံးပဲအဆင်ပြေပါစေဗျာာာာာ